"Please don't feel backwards."
အဲလိုဝါကြ အင်ျဂလိပျစကားပွောမှာ မရှိပါဘူး။ အင်ျဂလိပျစာ group တှမှော ဝါသနာရှငျ ဆရာလေးတှတေခြို့က share နတော ခဏခဏတှနေ့ရေလို့။ comment တှမှောလညျး ကြေးဇူးတငျကွောငျးတှေ ရေးထားကွတော့ အမှားကို အမှနျထငျကုနျကွမှာ စိုးရိမျလို့ပါ။
ကိုယျ့အသကျအရှယျ အတှအေ့ကွုံနဲ့ အသေးအဖှဲလေးတှေ လိုကျမပွောသငျ့တာ သိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ Please don't feel backwards. လိုဝါကြ အလှတျကကျြထားပွီး နိုငျငံခွားသားနဲ့ပွောမိရငျ တဖကျလူ နားလညျမှာမဟုတျဘူးဗြ။ သူက .. fall backward လို့ပွောတာလို့ထငျပွီး အျော...မပူပါနဲ့ ငါကောငျးကောငျးရပျနိုငျပါတယျ...လို့မြားပွနျပွောခဲ့ရငျ....-:)
အားနာတယျ...ကို အင်ျဂလိပျလို တိုကျရိုကျ ဘာသာပွနျလို့မရဘူး လို့ထငျပါတယျ။ အားနာတယျ ဆိုတာ...ကိုယျဒါကို လုပျလိုကျရငျ တဖကျသား စိတျဆိုးမလား...စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈသှား မလားလို့ စိုးရိမျပူပနျမိတာ...ဆိုတော့
အားနာတယျ..ကို အင်ျဂလိပျလို ဘယျလိုပွောကွမလဲ....
မငျးရဲ့ ဖုနျးကို ငါသုံးလို့ရမလား။
(ငါ သုံးရငျ မငျး စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈမလား။ အားနာတဲ့ ပုံစံ နဲ့မေးတာ)
ကိုယျက Would you mind if....နဲ့စပွီး ပွောလိုကျရငျ အားနာပါးနာနဲ့ တောငျးဆိုတယျဆိုတာ သူတို့ စကားပွောတဲ့ culture မှာ နားလညျပွီးသားပါ။
I feel bad that....
I feel bad to...
I am/was afraid that....
I am/feel hesitant to...
I am/feel/was/felt reluctant to...
ဒါတှအေားလုံးကို "အားနာတယျ" လို့ပွောခငျြရငျသုံးပါ။
I feel bad that I won't be able to come to your birthday party.
မငျးမှေးနေ့ ငါမလာနိုငျလို့ အားနာလိုကျတာ။
I feel bad to say 'no' to your offer.
မငျးရဲ့ ကမျးလှမျးခကျြကို ငွငျးရတာ အားနာပါတယျ။
I am afraid that I won't be able to lend you the money.
မငျးကို ပိုကျဆံမခြေးနိုငျတာ အားနာလိုကျတာ။
Sometimes I am hesitant to ask for your help.
တခါတလေ မငျးရဲ့ အကူအညီတောငျးရမှာ အားနာတယျ။
I was reluctant to ask the teacher for extra help, knowing how busy he was.
သူအရမျး အလုပျမြားတယျဆိုတာကို သိလို့ ဆရာ့ကို အကူအညီတောငျးရမှာ အားနာနခေဲ့တာ။
ကိုယျက သူမြားကို ..အားမနာပါနဲ့။ လုပျပါ...လို့ပွောခငျြရငျ ..အသုံးအမြားဆုံးဖွဈတဲ့ Please feel free. ကိုသုံးပါ။
Please don't hesitate to...if you...
Please feel free to use my phone.
Please don't hesitate to ask me for help.
Please don't hesitate to let me know if you need help.
အကူအညီလိုတာနဲ့ ပွောပါ။ အားမနာနဲ့။
*** Please don't feel backwards. လို့ ပွောလို့မရပါဘူး။
By Dr.Soe Than
အဲလိုဝါကျ အင်္ဂလိပ်စကားပြောမှာ မရှိပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာ group တွေမှာ ဝါသနာရှင် ဆရာလေးတွေတချို့က share နေတာ ခဏခဏတွေ့နေရလို့။ comment တွေမှာလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတွေ ရေးထားကြတော့ အမှားကို အမှန်ထင်ကုန်ကြမှာ စိုးရိမ်လို့ပါ။
ကိုယ့်အသက်အရွယ် အတွေ့အကြုံနဲ့ အသေးအဖွဲလေးတွေ လိုက်မပြောသင့်တာ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Please don't feel backwards. လိုဝါကျ အလွတ်ကျက်ထားပြီး နိုင်ငံခြားသားနဲ့ပြောမိရင် တဖက်လူ နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ သူက .. fall backward လို့ပြောတာလို့ထင်ပြီး အော်...မပူပါနဲ့ ငါကောင်းကောင်းရပ်နိုင်ပါတယ်...လို့များပြန်ပြောခဲ့ရင်....-:)
အားနာတယ်...ကို အင်္ဂလိပ်လို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်လို့မရဘူး လို့ထင်ပါတယ်။ အားနာတယ် ဆိုတာ...ကိုယ်ဒါကို လုပ်လိုက်ရင် တဖက်သား စိတ်ဆိုးမလား...စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွား မလားလို့ စိုးရိမ်ပူပန်မိတာ...ဆိုတော့
အားနာတယ်..ကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုပြောကြမလဲ....
မင်းရဲ့ ဖုန်းကို ငါသုံးလို့ရမလား။
(ငါ သုံးရင် မင်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မလား။ အားနာတဲ့ ပုံစံ နဲ့မေးတာ)
ကိုယ်က Would you mind if....နဲ့စပြီး ပြောလိုက်ရင် အားနာပါးနာနဲ့ တောင်းဆိုတယ်ဆိုတာ သူတို့ စကားပြောတဲ့ culture မှာ နားလည်ပြီးသားပါ။
ဒါတွေအားလုံးကို "အားနာတယ်" လို့ပြောချင်ရင်သုံးပါ။
မင်းမွေးနေ့ ငါမလာနိုင်လို့ အားနာလိုက်တာ။
မင်းရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို ငြင်းရတာ အားနာပါတယ်။
မင်းကို ပိုက်ဆံမချေးနိုင်တာ အားနာလိုက်တာ။
တခါတလေ မင်းရဲ့ အကူအညီတောင်းရမှာ အားနာတယ်။
သူအရမ်း အလုပ်များတယ်ဆိုတာကို သိလို့ ဆရာ့ကို အကူအညီတောင်းရမှာ အားနာနေခဲ့တာ။
ကိုယ်က သူများကို ..အားမနာပါနဲ့။ လုပ်ပါ...လို့ပြောချင်ရင် ..အသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Please feel free. ကိုသုံးပါ။
အကူအညီလိုတာနဲ့ ပြောပါ။ အားမနာနဲ့။
*** Please don't feel backwards. လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။
Read times Last modified on Tuesday, 29 June 2021 09:36